Fampidinana fampiharana Gabay Guro ho an'ny Android [Fanavaozana 2022] | APKOLL
Aprily 18, 2022 Janoary 23, 2022 by Reyan Ahmad
Salama daholo, mpampianatra ve ianao ary te hahita fomba hampianarana bebe kokoa? Raha eny dia eto isika miaraka amin'ny fampiharana Android, izay fantatra amin'ny hoe Gabay Guro App. Io no fampiharana Android farany, izay manolotra taranja fiofanana isan-karazany, fampahalalana momba ny vatsim-pianarana, ary maro hafa ho an'ny mpampianatra.
Ny fampianarana dia iray amin'ireo asa tsara indrindra sy manan-danja indrindra, izay manampy ny olona na mpianatra hafa hahatratra sy hahita fampahalalana sy fahalalana bebe kokoa. Ny mpampianatra no loharanom-pahalalana sy fahaiza-manao lehibe indrindra. Noho izany, tokony hanana fidirana tsara kokoa izy ireo mba hahazoana vaovao momba ny zavatra rehetra.
Ny mpampianatra mahay rehetra dia mila tonga lafatra amin'ny lafiny rehetra satria izy ireo no maodely ho an'ny mpianatra. Noho izany, izy ireo no antony lehibe mahatonga ny olona iray ho olona tsara sy tsara kokoa. Noho izany dia eto izahay miaraka amin'ity rindranasa Android mahagaga ity, izay ahafahan'ny mpampianatra mahazo loharanom-pahalalana tsara indrindra hanaterana vaovao.
Fampiharana maimaim-poana izy io, izay manome ny endrika tsara indrindra ho an'ny mpanabe rehetra mba hanome fampianarana tsara. Izahay dia hizara amin'ny antsipiriany ny momba an'ity fampiharana ity. Noho izany, raha mpampianatra ianao ary te-hijery izany miaraka aminay, dia afaka mijanona miaraka aminay ianao.
Topimaso momba ny Gabay Guro App
Izy io dia rindrambaiko Android, izay novolavolain'i Gabay Guro Developer. Izy io dia fampiharana fanabeazana, izay novolavolaina manokana ho an'ny mpampianatra. Manome serivisy samihafa izy io, izay hampiakaran'ny mpampianatra mana-pahaizana hizara vaovao amin'ny fomba tsara indrindra. Natao manokana ho an'i Philippines izy io, izay midika fa tsy misy ho an'ny firenen-kafa ny kinova ankehitriny.
Ny fanofanana mpampianatra dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanatsarana ny fahaizany. Noho izany, manolotra fampahalalana momba ny fiofanana sy fizotry ny fisoratana anarana izy ireo, izay ahafahan'izy ireo mihatra sy miditra amin'ny fiofanana. Manolotra fampianarana nomerika, izay ahafahan'ny mpampiasa mampitombo ny fahalalany momba ny vokatra sy serivisy nomerika.
The App fampiharana dia manolotra vondrom-piarahamonina naorina ihany koa, izay ahafahan'ny mpampiasa rehetra mifandray sy mizara ny heviny sy ny fahalalany. Io no sehatra tsara indrindra ifanakalozan-kevitra momba ny olana samihafa sy ny vahaolana satria ny mpampiasa rehetra dia hanana traikefa manokana hozaraina.
Izy io dia manome ny mpampiasa hangataka vatsim-pianarana, saingy tsy maintsy manamarina ny kaontinao ianao raha te hangataka ny iray amin'izy ireo. Rehefa vita ny fanamarinana ny laharana finday dia afaka mangataka vatsim-pianarana rehetra ianao. Azonao atao koa ny mamorona vola ho an'ny andrim-panjakanao.
Izy io koa dia manolotra rafitra e-wallet naorina, izay ahafahan'ny mpampiasa mitantana mora foana ny kaontiny. Mora ihany koa ny mamindra vola. Mila ny kaontinao Pay Maya fotsiny izy io, ary afaka mampiasa ny serivisy E-wallet koa ianao. Misy endri-javatra mahagaga maro kokoa, ao amin'ity fampiharana ity azonao jerena. Koa misintona Gabay Guro Apk ary ampitomboy ny fahaizanao mampianatra.
anarana Gabay Guro
Size 14.40 MB
Anaran'ny fonosana com.pldt.gabayguro
Developer Gabay Guro Developer
Nolazainay ny sasany amin'ireo fiasa ao amin'ilay fizarana etsy ambony ary ankehitriny izahay dia hizara ny lisitry ny fiasa lehibe aminareo rehetra ao amin'ny lisitra etsy ambany. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany ary aza misalasala mampiasa azy.
Fampahalalana azo alaina momba ny fiofanana
Mamorona vondrona, amin'ny alàlan'ny fanampiana mpampiasa hafa
Manana fampiharana hafa ho an'ny vahoaka Filipina izahay.
Azo alaina ao amin'ny Google Play Store izy io ary azonao sintonina avy amin'ity pejy ity ihany koa. Raha te-hisintona azy amin'ity pejy ity ianao dia mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny, izay misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Raha vantany vao vita ny fisintomana dia mila manova fanovana vitsivitsy ianao, alohan'ny fizotry ny fametrahana. Mba hanaovana izany, mandehana fotsiny amin'ny fanovana ary sokafy ny tontonana fiarovana, avy eo fanamarihana 'Source tsy fantatra'. Raha vantany vao vita io dingana io dia afaka mametraka azy amin'ny findainao ianao.
Gabay Guro App no ​​fampiharana tsara indrindra ho an'ny mpampianatra, hahitana fomba fampianarana vaovao sy mahatalanjona. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary manomboka mifandray amin'ny olon-kafa. Raha mbola manana fanontaniana momba an'ity fampiharana ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Sokajy Apps, fanabeazana Tags App fampiharana, Gabay Guro, Gabay Guro Apk, App Gabay Guro Post Fikarohana
Ampidino ny Sweet Crossing Snake IO Apk ho an'ny Android 